राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै, ब्याज कति ? - नेपालबहस
राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै, ब्याज कति ?
१० फागुण २०७७ | १३:२५:३४ मा प्रकाशित
१० फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले ८ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ (घ) ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त ऋणपत्रको व्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने जनाएको छ ।
उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था,गैर९बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी,संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । खरिदकर्ताले राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
यस ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिनरदिन पाइनेछ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोल फागुन ११ गते मंगलबार अपरान्ह ३ बजेसम्म हुनेछ । फागुन १२ गते निष्कासन भएर उक्त ऋणपत्रको साँवा २०८५ साल फागुन १२ गते भुक्तानी हुनेछ ।
ईच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
अब पशुपतिमा ‘क्यूआर कोड’बाट भेटी दान गर्न सकिने, गभर्नर अधिकारीले गरे शुभारम्भ १ दिन पहिले
ग्वार्काे तरकारी बजारमा कुमारी बैंकको क्युआर भुक्तानी सेवा विस्तार १ दिन पहिले
३० वर्षपछि झापामा पहिलो रबर उद्योग स्थापना १५ घण्टा पहिले
१६३ वर्ष कैद असुली १४ घण्टा पहिले
समाचारमा देखिएको विकृतिप्रति दलित पत्रकार संघको चिन्ता १ दिन पहिले
विद्यालयको आफ्नै छात्रावास भवन बन्ने २ दिन पहिले
बैकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ २ दिन पहिले
पर्साबाट ५ क्वीन्टल अँलैची बरामद ४ महिना पहिले
बैशाख तेस्रो साताबाट अन्तरप्रदेश यू–१६ राष्ट्रिय क्रिकेट हुने २ वर्ष पहिले
चिसो बढ्दै गएपछि चार दिन विद्यालय बन्द १ वर्ष पहिले
नेकपा सुर्खेतका सचिव र सदस्यलाई कोरोना ६ महिना पहिले